Sandesh Prawahदशैँमा विदेशबाट फर्किदा अर्काको भरिया बन्दै हुनुहुन्छ? परिएला फन्दामा। - Sandesh Prawah
दशैँमा विदेशबाट फर्किदा अर्काको भरिया बन्दै हुनुहुन्छ? परिएला फन्दामा।
काठमाडौ – दसैं घर आँगनमा प्रवेश गरिसकेको छ। परिवारजन र आफन्तसँगै बसेर वर्षभरीका दुःख पि’डा बिर्सिँदै दसैं मनाउन परदेश गएकाहरू फर्कन थालिसकेका छन्। यतिबेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन कक्षमा परदेशी र आफन्तहरूको मिलनको दृश्य देखिन थालेको छ। त्यही दृश्यभित्र भेटिए गुल्मीका दीपक पौडेल। कामको सिलसिलामा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) गएका उनी चार वर्षपछि फर्किएका हुन्। तीन वर्षको दसैं युएईमै मनाएको उनले बताए। ‘त्यहाँ पनि दसैं मनाइयो।
९.७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा, ३.५ प्रतिशत सामाजिक कार्य र ३ प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति किन्नमा खर्च गर्ने देखिएको अध्ययनले देखाएको छ। विदेशबाट ल्याएको रेमिट्यान्सको जम्मा १.१ प्रतिशत मात्रै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च भएको पनि अध्ययनले देखाएको छ। तर श्रम तथा आप्रवासन विज्ञहरूले भने नेपालीहरू जीविकोपार्जनकै लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था रहेकाले यसलाई सामान्य मान्दै आएका छन्। सेतोपाटी बाट